Sainzi uyo akabatsira kurwira Sars aids COVID-19 kurwa
Nguva yekutumira: Jun-12-2020
Cheng Jing Cheng Jing, musayendisiti ane timu yakagadzira yekutanga "DNA" yekuChina kuti iwane SARS makore gumi nemaviri apfuura, iri kubatsira zvakanyanya mukurwisa kubuda kweCCIDID-19. Pasati pasvika vhiki imwe chete, akatungamira timu kugadzira kit iyo inogona panguva imwecheteyo kuona matanhatu matanhatu ...Verenga zvimwe »
Kugadzirira kuri kufambira mberi nekumhanyisa kuzere kweBauma CHINA 2020
Kugadzirira kwa bauma CHINA kuri kufambira mberi kumhanya kuzere. Musangano wechigumi wepasirose wekutengesa michina yekuvaka, michina yekuvakisa, michina yemigodhi, mota dzekuvaka ichaitwa kubva munaNovember 24 kusvika 27, 2020 kuShanghai New International Expo Center (SNIEC). Sezvo i ...Verenga zvimwe »
GT Kambani pagore musangano mumwaka we2009
Musi waJanuary 15, GT Gungano Ragore ra2009 rakabudirira kubatwa.Iri rakapembererwa zvese zvatakakwanisa kuita muna 2019. Pikicha reboka Ndatenda nerutsigiro rwako gore rapfuura. Kukudzwa kwedu kukuru kuratidza kutenda nemaropafadzo kwauri! Chekutanga, sahwira wedu Ms. Sny, mukuru wekambani, madean anal ...Verenga zvimwe »
Nyowani Yakagadziriswa Rubber Track Pads yeOxpavator / Asphalt paver
Rubber pad imwe yemhando yekuvandudzwa uye yakawedzerwa chigadzirwa chekarubi rack, iwo makuru anotanga kuisirwa pamatareji esimbi, hunhu hwayo huri nyore kuisa uye usakanganise iyo nzvimbo yemugwagwa. Range rekushandisa: Excavator, Paver, Tondakita, Kuisa muchina, Isiri yekuchera machina, G ...Verenga zvimwe »
Rubber pad imwe yemhando yekuvandudzwa uye yakawedzerwa chigadzirwa chekarubi rack, iwo makuru anotanga kuisirwa pamatareji esimbi, hunhu hwayo huri nyore kuisa uye usakanganise iyo nzvimbo yemugwagwa. Range rekushandisa ...